Mavambo 1 | SCLBC Bible | YouVersion
I: MAVAMBO APASI POSE NAMAVAMBO AVANHU
1. KUSIKWA KWEZVINHU ZVOSE NOKUPUTSIKA KWAVANHU
Kusikwa kwezvinhu zvose
1Pakutanga Mwari akasika denga napasi. 2Pasi pakanga pasati panyatsoumbwa, pasina chinhu. Rima rakanga rakaputira zigungwa, Mweya waMwari achidzengerera pamusoro pemvura. 3Mwari akati, Mwari akati, “Chiedza ngachivepo,” chiedza chikavapo. 4Mwari akaona kuti chiedza chakanaka. Mwari akaparadzanisa chiedza nerima. 5Mwari akatumidza chiedza kuti masikati, rima akariti usiku. Kwakasviba kukaedza.#1:5 kukaedza: KuvaIsiraeri, zuva ravo vanoti rinotanga zuva rava kudoka richizopera mangwana acho panguva imwecheteyo zuva rava kudoka. Iri rakava zuva rokutanga.
6Mwari akati, “Pakati pemvura ngapave neziendanakuenda rinokamuranisa mvura.” 7Mwari akabva aita ziendanakuenda riya ndokukamuranisa mvura yakanga iri pasi peziendanakuenda iroro neyaiva nechapamusoro paro, zvikabva zvaita saizvozvo. 8Mwari akatumidza ziendanakuenda riya kuti denga. Kwakasviba kukaedza, iri rakava zuva rechipiri.
9Mwari akati, “Mvura iri pasi pedenga ngaiungane pamwechete kuti pasi pakaoma pabude pachena,” zvikabva zvaita saizvozvo. 10Mwari akatumidza pasi pakaoma kuti nyika. Mvura iya yakanga yaungana akaitumidza kuti makungwa. Mwari akaona kuti zvakanaka. 11Mwari akati, “Nyika ngaimere zvinomera zvorudzi norudzi, zvinomera zvine mhodzi dzazvo, namarudzi emiti inobereka michero ine mhodzi panyika,” zvikabva zvaita saizvozvo. 12Nyika yakamera zvinomera zvorudzi norudzi, nezvinomera zvine mhodzi dzazvo, namarudzi namarudzi emiti inobereka michero ine mhodzi. Zvikabva zvaita saizvozvo. Mwari akaona kuti zvakanaka. 13Kwakasviba kukaedza, iri rakava zuva rechitatu.
14Mwari akati, “Muziendanakuenda romudenga ngamuve namavheneko okusiyanisa masikati nousiku ave okuratidza mwaka namazuva namakore. 15Ngaave mavheneko omuziendanakuenda romudenga kuti avhenekere nyika,” zvikabva zvaita saizvozvo. 16Mwari akaita mazivheneko maviri kunoti, zivheneko guru rokutonga masikati, kozoti zivheneko duku rokutonga usiku, akaitawo nyenyedzi. 17Mwari akazviisa muziendanakuenda romudenga kuti zvivhenekere nyika, 18zvichitonga masikati nousiku nokusiyanisa chiedza nerima. Mwari akaona kuti zvakanaka. 19Kwakasviba kukaedza, iri rakava zuva rechina.
20Mwari akati, “Mumvura ngamuite bvakapfaka rezvinhu zvipenyu zvinoshambira. Shiriwo ngadzibhururuke pamusoro penyika nomudenga muziendanakuenda.” 21Mwari akasika mhando nemhando dzamazigaranyanya omumvura nedzezvinhu zvose zvazvo zvipenyu zvinofamba, zvinoita bvakapfaka mumvura, namarudzi ose eshiri dzine mapapiro. Mwari akaona kuti zvakanaka. 22Mwari akazvikomborera achiti, “Berekanai muwande muzadze mvura yomumakungwa. Shiri ngadziwandewo panyika.” 23Kwakasviba kukaedza, iri rakava zuva rechishanu.
24Mwari akati, “Nyika ngaiburitse mhando nemhando dzezvinhu zvipenyu, mhando nemhando dzezvipfuwo, nedzezvinokambaira nokuzvova napasi, nedzemhuka dzesango,” zvikabva zvaita saizvozvo. 25Mwari akasika mhando nemhando dzemhuka dziri panyika, nemhando dzose dzezvipfuwo nedzezvinokambaira nokuzvova napasi. Mwari akaona kuti zvakanaka.
26Mwari akati, “Ngatiitei munhu akafanana nesu, akatodzana nesu. Ngavave noutongi hwenyika yose nohwehove dzomugungwa neshiri dzedenga nezvipfuwo nezvinokambaira nokuzvova napasi.” 27Mwari akasika munhu akamufananidza naiye pachake, akavasika vari munhurume nomunhukadzi. 28Mwari akavakomborera achiti, “Berekanai muwande, muzadze nyika, muitonge. Ivai noutongi pamusoro pehove dzomugungwa, neshiri dzedenga, nezvinhu zvose zvipenyu zvinofamba panyika.” 29Mwari akati, “Chionai, ndakupai zvinomera zvose zvine mhodzi dzazvo zviri panyika, nemiti inobereka michero ine mhodzi kuti zvive chokudya chenyu. 30Asi ndapa zvinomera zvinyoro kumhuka dzesango neshiri dzose dzedenga, nezvinokambaira nokuzvova napasi, nezvinhu zvipenyu zvose zvinofema kuti chive chokudya chazvo,” zvikabva zvaita saizvozvo. 31Mwari akatarisa zvose zvaakanga aita, onei zvakanaka kwazvo. Kwakasviba kukaedza, iri rakava zuva rechitanhatu.
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008.
Learn More About Bhaibhiri Idzva rechiShona rine Dhuterokanonika
Explore Mavambo 1 by Verse